Yariisow oo la kulmay Danjireyaal uu ku jiro Donald Yamamato-Sawiro • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Yariisow oo la kulmay Danjireyaal uu ku jiro Donald Yamamato-Sawiro
Yariisow oo la kulmay Danjireyaal uu ku jiro Donald Yamamato-Sawiro
November 29, 2018 - By: Abdirisak Faamoos
Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdirixmaan Cumar Cusmaan (Eng.Yarisow) ayaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya kula kulmay Danjiraha Dalka Maraykanka ee Soomaaliya Mudane Donald Y. Yamamoto iyo Madaxa USAID Jeffry Bakkan.
Guddoomiyaha ayaa la wadaagay Danjire Yamamoto horumarrada kala duwan ee uu ku tallaabsaday Gobolka Banaadir, dadaallada dib u dejinta barakacayaasha, caqabadaha jira ee la xiriira dhanka amniga iyo hiigsiga Maamulka ee ku qotama dib u dhiska iyo horumarinta kaabeyaasha dhaqaalaha.
Dhankiisa, Danjiraha ayaa ku bogaadiyey maamulka Gobolka Banaadir qorsheyaashooda horumarineed iyo xaqiijinta hiigsiyada ay tiigsanayaan, waxa uuna tilmaamay sida ay uga go’an tahay in ay kaalintooda ka geystaan horumarka, amniga iyo bilicda Caasimadda.
Dhanka kale, Duqa Muqdisho iyo Madaxa USAID ayaa ka wada hadlay sidii ay gacan uga geysan lahaayeen shaqo abuurka dhalinyarada Caasimadda iyo dhismaha golleyaasha deegaanka ee dhowaan la qorsheynayo in la hirgeliyo.
Sidoo kale, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa kulan kale la qaatay Danijiraha Dalka Denmark u fadhida Soomaaliya Marwo Mette Knudsen iyagoona ka wada hadlay dardar gelinta taageerada Dalkaas ay u fidiyaan Gobolka Banaadir in ay ballaariyan mashaariicda horumarineed ee ay ka fuliyaan Gobolka.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdirixmaan Cumar Cusmaan (Eng.Yarisow) ayaa safar shaqo ku jooga dalka Kenya, halkaas oo uu kulammo ku saabsan dardar gelinta barnaamijyada horumarineed ee Caasimadda uu la yeelanayo Madaxda iyo masuuliyiinta Beesha Caalamka iyo danjireyaasha dalalka saaxiibka la ah Dowladda Federaalka Soomaaliya.